Back Pressure High Temperature Cooking Pot Factory - China Back Pressure High Temperature Cooking Pot လုပ်ငန်းရှင်များ၊
DRK137B Back Pressure အပူချိန်မြင့် ဟင်းချက်အိုး
DRK137B နောက်ပြန်ဖိအားသည် အပူချိန်မြင့်သည့် ဟင်းချက်အိုးကိရိယာသည် အစားအစာထုပ်ပိုးအိတ်များ၊ ကော်များ၊ မှင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ရုပ်ရှင်များ၏ အပူချိန်မြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။၎င်းသည် အစားအသောက်သုတေသနအင်စတီကျုရှိ ပိုးမွှားထုတ်ပိုးမှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် စံပြကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်မှု၊ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် စမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပူချိန်၊ ဖိအားကျော်မှု၊ ရေပမာဏနှင့် ယိုစိမ့်မှုများအတွက် အလိုအလျောက် အကာအကွယ် ပေးစွမ်းနိုင်မှု ဆူပွက်မှုနှင့် လျင်မြန်သော အအေးပြန်ဖိအား ချက်ပြုတ်ခြင်း Wi...
DRK137A Back Pressure အပူချိန်မြင့် ဟင်းချက်အိုး
DRK137A ပြောင်းပြန်ဖိအားသည် အပူချိန်မြင့်သည့် ဟင်းချက်အိုးပစ္စည်းများသည် အစားအစာထုပ်ပိုးအိတ်များ၊ ကော်များ၊ မှင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ရုပ်ရှင်များ၏ အပူချိန်မြင့်မားသော ချက်ပြုတ်စမ်းသပ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်။၎င်းသည် အစားအသောက်သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနယူနစ်များတွင် ပိုးသတ်ဆေးထုပ်ပိုးမှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် စံပြကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။အင်္ဂါရပ်များ- 1. မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်မှု၊ အလိုအလျောက် အပူချိန်လွန်မှု၊ ဗို့အားလွန်မှု၊ ရေပမာဏ၊ ယိုစိမ့်မှု ကာကွယ်မှု 2. ၎င်းသည် စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း ဆူပွက်နေပြီး အမြန်အအေးခံနိုင်သည်။နောက်ပြန်ဖိအားချက်ပြုတ်မှု၏ dual-mode လည်ပတ်မှု။
DRK137 ဒေါင်လိုက် ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ပိုးသတ်အိုး
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောယဉ်ကျေးမှုအလယ်အလတ်၊ ပိုးသတ်ကိရိယာများစသည်တို့ကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် သင့်တော်ပါသည်။ DRK137 ဒေါင်လိုက်ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ပိုးသတ်ဆေး [Standard configuration type / automatic exhaust type] (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) ဤထုတ်ကုန်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာမဟုတ်သော၊ ထုတ်ကုန်၊ သိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဓာတုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားယူနစ်များအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။ဤထုတ်ကုန်သည် မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ယဉ်ကျေးမှုအလယ်အလတ်နှင့် ပိုးမွှားများကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်...